बिवाह अघि नै सबै सिकाइदिन्छु भन्दै गर्भवती बनाएर युवा फरार…. – Sidha Post 24
बिवाह अघि नै सबै सिकाइदिन्छु भन्दै गर्भवती बनाएर युवा फरार….
छोरी र बालिकाहरु माथि हुने नराम्रा घटनामा परिवारकै सदस्य संलग्न भएका धेरै उदाहरण देखिएका छन् । बैतडी घटनामा पनि नातामा भाई नै संलग्न भएको खुलेको छ । यता बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि आफ्ना २ नाबालक बहिनीहरुलाई त्यस्तै कार्य गरेको अभियोगमा दाजु वि’रु’द्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।
घटना विवरण सुनाउँदै बालिकाहरुका बुवाले भने, हामी नभएको बेलामा घरमा आउँदो रहेछ। ध म्की दिएर कपडा खो’ ‘ल्दै विवाह अघि नै सबैकुरा सि’काइ’दिन्छु भनेर हाम्रा भि’त्रि अ’ङ्ग खे’ला’उ’ने ज’स्ता काम ग’र्दो रहेछ । ‘जेठी छोरीसँग त्यस्तो व्य’वहार भएको छोराले देखेर हामीलाई भन्यो। छोरीसँग बुझ्दा कान्छी छोरीसँग त्यस्तै क्रि’या’कला’प पटक–पटक गरेको थाहा पाएपछि उजुरी गरेका हौं।’
उस्तै परे जनताले केपी आउ, देश बचाउ भन्न बेर छैन यहाँः टोपबहादुर रायमाझी
अरुले २० बर्षमा गर्ने बिकास मैले ३ बर्षमा गरे : केपी ओली